TOLO-TANANA HO AN’I LEGO : Mpanakanto maro no handray anjara amin’ilay hetsika manokana
Hanatontosa hetsika manokana ho tolo-tanana ho an’i Lego ireo mpanakanto maro eto amintsika, ny alin’ny alakamisy izao, etsy amin’ny Le Glacier Analakely. 11 octobre 2017
Natokana ho fanohanana an’ity mpanakanto ity amin’ny fitsaboana azy no hanatanterahana io alim-pandihizana govana miavaka io. Mpanakanto maro no handray anjara amin’izany. Efa telo volana no tsy salama i Lego ary Avc no mahazo azy. Tamin’ny fanombohan’ny aretina dia tsy nahatsangana mihitsy ny lehilahy ary na miresaka aza tsy afaka nataony ihany koa.
Ankehitriny kosa mba efa mihatsara ny fahasalamany ary etsy amin’ny tranony ao 67 ha ihany izy no manaraka fitsaboana. Olana ara-pianakaviana no nanaitra azy tampoka ary tsy nahatsiaro tena avy hatrany ny mpanakanto nandritra izany ka noentina namonjy hopitaly. Tsy nanampo ny zavatra nolazaina taminy i Lego ary noentin-katezerana.
Nikaon-doha ny mpanakanto eto an-toerana hanao hetsika mba hanampiana an’i Lego amin’ny fitsaboana azy. Manentana izay malala-tanana rehetra ny fianakaviana sy ireo mpikarakara ho tonga maro amin’io fotoana.